Taratasy fiarahabana ny mpivarotra
Mon - Sab amin'ny 8:30 maraina ka hatramin'ny 17:30 hariva
Fampidirana ny Suko Ptfe （Uhmwpe） Ram Rod Extruder
PTFE Mametaka extruder
Fampidirana ny Suko Ptfe （Uhmwpe） Ram Tube Extruder
Masinina fanaovan-gazety Gaskets
Tube Mpampiditra Extruder
Milina Tube Sodina mitafo
Torolalana momba ny Extruder an'ny Suko Ptfe Paste
Momba an'i SUKO
Masinina fanaovana ski
PTFE Plastika mitafo fanitso ...
Polymer PTFE milahatra Tube / P ...
1/2 Inch PTFE miady Tu ...
Tube PTFE mainty / Sodina / Selika ...
Moly nameno PTFE koronosy Tu ...
karazana mitsivalana Polymer PTFE ...
PTFE plastika semi-mandeha ho azy ...
Tube Tube Vertical Type Polymer ...
Vita soa aman-tsara ny fametrahana sy ny fanirahana ny tetikasa Koreana, ary hampiasaina amin'ny fomba ofisialy ny tsipika fampidirana petra!
Votoatiny: Amin'izao fotoana izao, ny orinasanay dia nahavita ny fametrahana ny vahaolana namboarina ho an'ny extruder namboarina mifanaraka amin'ny filan'ny mpanjifa Koreana. Apetraho izao ...
Inona no maha samy hafa ny Polypropylene sy ny Polymer PTFE / FEP Machining?
PTFE, fantatra amin'ny anarana hoe plastika. Polytetrafluoroethylene (PTFE) dia fluoropolymer synthetic an'ny tetrafluoroethylene izay manana fampiasa betsaka amin'ny fampiharana samihafa toy ny ampiasaina amin'ny PTFE Tape. PTFE dia fluorocarbon solid, satria izy io dia fitambaran'ny molekiola avo-molotra feno karbonina sy fl ...
PFA, na Perfluoroalkoxy, dia karazana fluoropolymer. Manana toetra mitovy amin'izany izy amin'ny polytetrafluoroethylene mahazatra kokoa (PTFE), izay endrika polymer malaza kokoa. Ny PFA dia torontoronina avy tamin'ny DuPont Co. ary nomena ny marika polymer PFA. Inona no mampiavaka azy amin'ny resi ...
Ny dingan'ny famolavolana ny milina fanontam-pirinty mandeha ho azy
Ny fanodinana plastika vita amin'ny endriny sy ny famolavolana ny fampiharana ao an-tanàna dia iray amin'ireo teknolojia tranainy indrindra. Manana teknolojia famokarana matotra izy io, tsotra ny fitaovana ary ny bobongolo, mora mamorona vokatra lehibe, afaka mampiasa fomba maro hanatsarana ny famokarana ampahany kely, sns, amin'ny milina, elektronika, ...
Ireo lasitra novidian'ny mpanjifa dia nalefa tany Singapour
Ity mpanjifa Singaporeana ity dia nividy andian-tsarin'ny milina extruder rodan'ny Polymer Ptfe tamin'ny orinasanay. Taorian'ny fotoana fohy nampiasana azy dia manome tombana tsara ny mpanjifa. T ...
Tape PTFE vita amin'ny fluoropolymer Polymer Fizarana 1
Thread tombo-kase dia sarimihetsika polytetrafluoroethylene (PTFE) ho ampiasaina amin'ny kofehy famehezana. Ny kasety dia amidy tapaka amin'ny sakan'ny manokana sy ny ratra amin'ny kofehy, ka manamora ny familiana ny tadin'ny fantsona. Tape PTFE "FAT" vita amin'ny fluoropolymer "FAT" PTFE vita amin'ny fluoropo ...
123456 Manaraka> >> Pejy 1/82
Làlana No.5 Lvshu 3, Xuejia, Distrikan'i Xinbei, Changzhou, Jiangsu, Sina.213000